Shina: Ady amin’ny fihazonam-baovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2019 3:19 GMT
Nisy sary niparitaka tamin'ny twitter milaza ny fomba fiadian'ny olom-pirenena ao Shina amin'ny fanakanam-baovao sy fanodikodinam-baovaoo ataon'ny andrim-panjakana tao anatin'ny andro vitsy lasa. Eto ambany ny endrika an-tsary.
Ny saina mena dia ny andrim-panjakana sy ny antokon'ny governemanta tafiditra amin'ny fifehezana ny vaovao, fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fibahanana. Ny telozoro mangamanga kosa dia sehatra ara-barotra, ary ny zana-tsipika (flèche) mangamanga indray dia hetsiky ny mpiserasera amin'ny fanamorana ny fivezivezen'ny vaovao manoloana ny fihazonana ataon'ny fanjakana
Manana vaovao farany momba ny fanamafisana ny fifehezana ny aterineto ao Shina i Rebecca Mackinnon. Ny hetsika farany dia mikendry ireo hafatra amin'ny finday, ny milina fikarohana, ny fizarana angon-drakitra sy ny fandraketana anaran-tsehatra.